Dassault Mirage III ကို EZ FS2004 DOWNLOAD - Rikoooo
အရွယ် 8.7 ကို MB
downloads ရယူရန္ 16 052
တိုက်လေယာဉ်။ Description: Mirage IIIE စီးရီး Z. အခန်းက္ပ: ကြားဖြတ်! ဒါဟာအဆင်းလှ၏! တစ်ခုမှာ repaints ။ တစ်ဦးက FS2004 အတွက်ရှိရမည်။
အဆိုပါ Mirage III ကိုကွယ်လွန်သူ 1950s စဉ်အတွင်းပြင်သစ်လေယာဉ်ထုတ်လုပ်သည့် Dassault Aviation ကဒီဇိုင်းတစ်ခုဘက်စုံသုံးလေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်ကိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက် Mach2တစ်မြန်နှုန်းကျော်လွှားနိုင်စွမ်းဥရောပဒီဇိုင်း၏ပထမဦးဆုံးတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Mirage III ကိုအများအပြားမူကွဲအတွက်ရလဒ်နှင့် (တစ်အကောင့်သို့ Mirage 21 သတ်မှတ်ထားတဲ့ဗားရှင်းကြာလျှင်) 1401 အသုံးပြုသူများနှင့် built5ယူနစ်နှင့်အတူတင်ပို့နိုင်ငံများအတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအောင်မြင်မှုနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဆွစ်ဇလန်, သြစတြေးလျနှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံလိုင်စင်အောက်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဣသရလေအ Mirage III ကို (Nesher နှင့် Kfir) အပေါ်ပြည်တွင်းမှာအခြေစိုက်လေယာဉ်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ပထမဦးဆုံး Mirage အစောပိုင်း 1960s အတွက်ကယ်နှုတ်ခဲ့ကြစဉ်တွင်, များစွာသောဥပမာ 40 နှစ်အကြာမှာအစောပိုင်းနှစ်ဆယ်ရာစုအတွင်းကမ္ဘာတဝှမ်းဝန်ဆောင်မှုနေဆဲဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကများသောအားဖြင့်ကျယ်ပြန့်ခေတ်မီကြပြီ။ (ဝီကီပီးဒီးယား)